पुटिनको प्रश्नः आणविक हमला ‘धम्की’ मात्र हो भन्ने को ? | Prahar News
पुटिनको प्रश्नः आणविक हमला ‘धम्की’ मात्र हो भन्ने को ?
मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक हतियारको प्रयोग धम्कीमात्र नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको महशुस भए आणविक हतियार प्रयोग गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । पुटिनले सेन्ट पिटर्सवर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्चलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
पुटिनले भनेका छन्, “यस विषयमा कुनै गैर जिम्मेवार राजनेता, विदेश मामिला मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आ–आफ्नै किसिमले प्रतिक्रिया देलान् । र हामीले केहि नभनौँला ? हामीले त्यस्ता प्रतिक्रियालाई मिल्नेगरी जवाफ दिएको सुनेर सबैले भन्नेछन्–ल, हेर रुसले धम्की दिँदैछ ! तर, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हामीसँग आणविक हतियार छ, यदि सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा हामी त्यसलाई प्रयोग पनि गर्छौँ ।”
जुन १२ मा रुसी विदेश मन्त्रालयका महिला प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले रुसले पोल्यान्डमाथि आणविक हतियार प्रहार गर्नसक्ने बताएकी थिइन् । त्यसैगरी, रुसी महसंघको डुमाका अध्यक्ष भ्याचेस्लाभ भोलोदिनले युक्रेनलाई आणविक हातहतियार फर्काइएको खण्डमा सुरु हुने संभावित आणविक द्वन्द्वको दौरान युरोपेली महादेश नै ध्वस्त हुने विचार प्रकट गरेका थिए । यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आणविक हतियार प्रयोग गरेको खण्डमा रुसले अत्यन्तै गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यसैगरी रुसको अन्तरिक्ष निकाय रोस्कोस्मोसका निर्देशक दिमित्री रोगोजिनले ठट्टा गर्दै भनेका थिए, “यदि नेटोको सदस्यता लिएको खण्डमा रुसको क्रेमलिनले स्विडेन र फिनल्यान्डमाथि आणविक आक्रमण गर्न सक्ने छ ।” युक्रेनस्का प्राभ्दाबाट ।